We.com.mm - ပျိုမေတို့ရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲကို ဝတ်မသွားသင့်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း (၈) ခု…။
ဖက်ရှင်ဆိုတာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူရှိပါတယ်…။ ဖက်ရှင်ကျတယ်ဆိုတာကောင်းပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့သူ မဝတ်တတ်တဲ့အခါတွေမှာ မှားယွင်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်…။ လူအများကကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကို အထင်သေးသွားစေနိုင်ပါသေးတယ်…။
ဒီတော့ လိုက်ဖက်တဲ့နေရာနဲ့ သင့်လျော်တဲ့အင်္ကျီကိုပဲ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်…။ ရုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာလည်း လိုက်ဖက်တဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးကိုပဲ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်…။ ကိုယ်ကတော့ဖက်ရှင်ကျမှာပဲဆိုပြီး ဝတ်သွားပေမယ့် ဝတ်ရမယ့်နေရာမှားနေတာတွေကလည်း သင့်ကိုအင်မတန်ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်…။
စကပ်တိုလေးတွေကလည်း သင့်အလုပ်ခွင်ထဲကို ဝတ်မသွားသင့်တဲ့ဖက်ရှင်မျိုးပါပဲ…။ တစ်ချို့ ရုံးဝတ်စုံတွေမှာလည်း အတိုဒီဇိုင်းလေးတွေရှိနေပေမယ့်လည်း အရမ်းကြီးမတိုတဲ့စကပ်မျိုးဆိုရင်တော့ ဝတ်လို့ရပါတယ်…။ အရမ်းတိုနေတဲ့ စကပ်မျိုးကျတော့ လူကြီးတွေရှေ့မှာလည်း နေရတာအဆင်ပြေမှုမရှိသလို မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း မသင့်တော်ပါဘူး…။
အခုခေတ်မှာတော်တော်များများလည်း ဝတ်လာကြပါပြီ…။ ဖက်ရှင်ကျတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီအပြဲဒီဇိုင်းတွေကိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုဝတ်သွားဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး…။ အဲဒီအစား ပိတ်ရက်မှာအပြင်သွားရင်ဝတ်ဖို့အတွက် သိမ်းထားလိုက်ပါ…။
၃. ရောမခေတ်ပုံစံ ဖိနပ်ဒီဇိုင်း…။
ရောမခေတ်ပုံစံဖိနပ်ဒီဇိုင်းတွေက များသောအားဖြင့်ကြိုးတွေရှုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းထားတဲ့ဖက်ရှင်မျိုးပါ…။ ဒီလိုဖိနပ်မျိုးက နွေရာသီမှာဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းမိုက်တဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့်…၊ အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အိမ်မှာပဲသိမ်းထားသင့်ပါတယ်…။
၄. Shoulder Off…။
အခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတိုင်းဆီမှာ Shoulder Off အင်္ကျီလေးတွေရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ Shoulder Off အင်္ကျီလေးတွေကအရမ်းလည်းလှသလို ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကိုလည်း နည်းနည်းလှစ်ဟပြထားသလိုဖြစ်တာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိနေစေပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကြူး ရင်ဘတ်နားနဲ့ကပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ Shoulder Off မျိုးကိုတော့ အလုပ်ခွင်ထဲဝတ်သွားတာကို ရှောင်သင့်ပါတယ်…။
၅. တိရိစ္ဆာန်အရေခွံပုံစံ ဒီဇိုင်းတွေ…။
ကျားသစ်အရေခွံပုံစံ ဒီဇိုင်းအင်္ကျီတွေကလည်း ဖက်ရှင်ကျတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အလုပ်ခွင်ထဲကိုဝတ်သွားဖို့လောက်ထိတော့ အဆင်မပြေစေပါဘူး…။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကို အလုပ်ခွင်ထဲကိုဝတ်မသွားပဲ ပိတ်ရက်တွေမှာ NightOut ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဝတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ…။
၆. Leather ဘောင်းဘီ…။
Leather ဘောင်းဘီတွေကို အလုပ်ခွင်ထဲကို ဝတ်သွားဖို့ဆိုတာတော်တော်ကို အဆင်မပြေတဲ့အရာပါ…။ Leather ဘောင်းဘီတွေကို သင့်ကို Sexy ကျစေတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို လုံးဝဝတ်မသွားသင့်ပါဘူး…။
၇. အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်တဲ့ စာတန်းပါတဲ့အိတ်တွေ…။
ဒီလိုမျိုး အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်တဲ့ စာတန်းတွေပါတဲ့အိတ်တွေက အခုနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီး ခေတ်စားလို့လာပါတယ်…။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်ကတော့ ကြိုက်လို့ဝတ်သွားပေမယ့် ရုံးသွားတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့တော့ လုံးဝမလိုက်ဖက်ပါဘူး…။ ဒါကြောင့် ပိတ်ရက်တွေမှာ Shopping ထွက်တဲ့အခါ…။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်တဲ့အခါမှာ ဝတ်သွားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ…။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို သွားတဲ့အခါမှာ Accessory ကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီး ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်…။ Accessory အနေနဲ့ ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ Chokers ကိုတော့ရှောင်သင့်ပါတယ်…။ Chocker အပြင်သွားတဲ့အခါမှာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Chocker ဝတ်ဆင်သွားရင် အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မလိုက်ဖက်စေပါဘူး…။
Crop top လေးတွေနဲ့ ချစ်ဖိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုဝတ်မလဲ
*** ယောကျာ်းလေးတွေအတွက် လွယ်ကူပြီးစတိုင်ကျတဲ့ Pose ပေးနည်းများ ***
မိန်းကလေးတွေကြားမှာရေပန်းစားလာအုံးမယ့် Marble ကျောက် လက်သည်းဒီဇိုင်းများ